Tantaran'ny orinasa - Beijing Grip Pipe Technology Co., Ltd.
Fitsapana ny vokatra
Fampifanarahana amin'ny fantsona
Pipa fanamboarana fanitsiana
Fittings Pipe hafa
Serivisy sy fanohanana
Beijing Grip Pipe Technologies Company Limited dia miorina ao amin'ny Beijing Development Area (BDA), nanomboka ny fitambaran-tsolika sy ny clamp R&D tamin'ny faran'ny taona 1990 ary nanomboka ny famokarana tamin'ny fiandohan'ny taona 2000. Ny patanty, azo antoka ary avo lenta fantsom-pitendry sy clamp dia nalaza teo amin'ireo indostrian'ny tafika taoriana kelin'izay azon'izy ireo ny santionany. Ny vokatray dia namaha ny olana ara-teknikan'izy ireo. Nanomboka tamin'izay, izahay Beijing Grip dia nekena ho mpamatsy paompy voatendry ho an'ny fitaovana an-dranomasina, fanamboarana sambo, solika ary gazy any Shina nandritra ny folo taona mahery. Manohy mamolavola sy manatsara ny vokatra izahay hamaly ny fangatahan'ny mpanjifa hatrany.
Ny vokatray dia voamarina amin'ny ISO9001-2008, CCS (China Classification Society), DNV.GL, BV, RMRS sns, izay manamarina ny kalitaon'ny BJGRIP ary mahatonga anay ho mpanamboatra fantsom-pifandraisana No.1 ao Shina. Mahazo atrikasa famokarana 2000 metatra toradroa izahay, ekipa R&D roa ary ekipa QC iray hiantohana ny famokarana ara-potoana sy mahay.
Miaraka amin'ny fivoarana sy ny fitomboan'ny asa aman-draharaha, nanitatra tsena mpaninjara fotsiny izahay tamin'ny taona 2012. Ny tanjonay dia ny hanomezana kojakoja fantsona avo lenta tsara sy mahomby amin'ny mpampiasa manerantany!
Miezaha mamolavola sy manamboatra vokatra milina teknolojia manerantany amin'ny alàlan'ny fanavaozana ara-teknika.
Manaova vokatra kilasy voalohany hananganana marika Beijing Grip marika manerantany.
Ny kalitao voalohany, miorina amin'ny fahatokisan-tena, mifantoka amin'ny fitantanana, serivisy tso-po.
Ny Beijing Grip Pipe Technologies Company Limited dia miorina ao amin'ny faritra fampandrosoana any Beijing (BDA), nanomboka ny fandrindrana fantsom-pohy sy ny fametahana R&D tamin'ny faran'ny taona 1990 ary nanomboka ny famokarana tamin'ny fiandohan'ny taona 2000. Ny patanty, ny azo antoka ary ny kalitaon'ny fantsom-pifaneraserana ary ny clamp dia nalaza teo amin'ny indostrian'ny tafika…
Company: Beijing Grip Pipe Technology Co., Ltd.
ampiana hoe: 32 #, Jinghai 1st Road, BDA, Beijing, Sina.
Fax: + 86-10-87398232